Lukathayela kuyinto uyibhala lashukumisa steel, ebusweni okuyinto sisetshenziswa ngesikhathi womshini esivikelo enamathela polymeric, ngelula sempilo. Ngokubukeka, le nto iyafana tin lukathayela, kodwa enamathela ovikelayo abizele ukusika izindlela ezihlukile eyasetshenziswa endabeni tin. Uma umsebenzi nawe sanquma ukuba sisebenzise ibhodi lukathayela, kuka ukusika izinto, kudingeka unqume ukuthi ngaphambi kokuqala umsebenzi, ngoba kunconywa sokumazi ngamathuluzi ezivamile.
Amathuluzi ukusika ibhodi lukathayela
Amathuluzi ethandwa kakhulu ezisetshenziswa namuhla ukusika ibhodi lukathayela yilezi:
kagesi Jigsaw mqulu;
Ngesandla babona isiyingi.
Abakhiqizi engela grinders kungukuthi Kunconywa ukuba asebenzise kule divayisi ukusika izinto ezichazwe ngenxa yokuthi luthi alufane polymer akakwazi ukumelana umphumela ezishisayo. Nokho, abanye abathengisi sheeting esetshenziswa grinders futhi ukholwa ukuthi leli thuluzi elula kunazo. Uma unquma ukusebenzisa grinder engela, wena kufanele aqondiswe izimiso ezithile, bona ufunde kanje: esikhundleni se-olwalwenza wheel drive kubalulekile ukusebenzisa nge Carbide amazinyo, it has a isihloko disc ukusika ibhodi lukathayela. I ukushuba we isici ahlabayo ungakwazi ukukwenza kufanele kulingane phakathi 1 kuya 1.6 mm. Ukuze uvimbele ukugqwala izinqubo kumelwe inqunywe umugqa emva kokuphothulwa izinga upende elingenamikhono olufana luhlaza ishidi iphrofayli. Uma usebenzisa idrayivu ukusika ibhodi lukathayela, emgqeni ahlabayo ngeke ukukhulisa lihlale esihle. Abanye ochwepheshe zisebenzisa amadiski nge diamond-okulinganiswa, kuyilapho kungenzeka ukusika lonke inqwaba yomagazini amashidi, aqukethe kuze kube izicucu 10.
Kufanele ngisebenzisa grinder
Ukusetshenziswa grinders ukusika trapezoid ishidi kunezinzuzo zako kanye nebubi. Lesi sakamuva singabangela ubizwe ijubane yokwehlisa kanye lula umsebenzi. Nokho, zikhona yokuntula, enye yazo okukhulunywe ngaye ngenhla. Phakathi kwezinye izinto, luthi alufane zinc kungalimala, kanye lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela polymer elivutha, futhi ube yinhlansi uyowela amashidi, evutha ezindaweni zawo. Olubunjiwe metal izinhlayiya okuzokwenza abanamathela kobuso ngeke ukuqhubekisela phambili imbangela kumiswa ukugqwala. Uma uke wasebenzisa okungenani kanye umsebenzi ithuluzi enjalo, ngabe sengibona ukuthi Ishidi emaphethelweni Ragged we ematfuba futhi kuthatha isikhathi eside ukuba asuse burrs. Omunye nemiphumela ethile engathandeki wezenzo futhi udale umsindo ngaphezulu. Kodwa uma usebenzisa disc ekhethekile, ikwazi ukuqeda eziningi izici ezingezinhle isicelo Bulgarian.
Uma kusetshenziswe ibhodi lukathayela, kuka ukusika izinto, ukuxazulula zonke okuyinhloko. Ukuphuca impahla kungenzeka hacksaw, ishidi luzovezwa ekubhujisweni kancane. Decking ayinayo ukumelana lapho ukusika, ngakho imisebenzi yezandla ngeke kuthathe isikhathi esiningi nomzamo omkhulu. Ngenxa yokuthi umphumela ezishisayo kuyoba ngingekho, bakwazi ukugcina impahla enamathela. Hacksaw linikeza izinzuzo eziningi nalo, ungakwazi ukusika ishidi ngokucophelela futhi ngokushesha, futhi akudingeki ukuba sizame kakhulu. Kodwa zikhona yokuntula ezithile, isibonelo, uma usebenza ngensimbi yomculo akunakwenzeka ukuthola amafomu curvilinear, kodwa Imigqa ehlanzekile - kalula. Uma usebenzisa hacksaw, futhi kudinga ithebula eyengeziwe ngoba ahlabayo.
Kunini lapho kufanele ngithinte zisebenzisa i-jigsaw kagesi mathupha
Uma udinga idivaysi ye ukusika ibhodi lukathayela wena, ungakhetha ibhukwana noma Jigsaw kagesi. Lona ithuluzi ihlukile hacksaw enikeza osezingeni lwalugobile. Lapho eqhathanisa amathuluzi kagesi isandla ngeke ukuthole Ungakanani umehluko, kodwa uhlobo kagesi ikuvumela ukuba wenze umsebenzi esikhathini esifushane. JIG Electric inhlukano esetshenziselwa amashidi ezincane ubude futhi ukuphakama imitshingo ngaleyo ndlela akufanele bube ngaphezu kuka-25 mm. AmaSpredishithi kungenziwa usike kokubili yonkana kanye kanye, futhi kuwebhu has ngizigone, ukuqeda vibration. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ahlabayo kufanele sigcwaliswe ngesivinini, kanye sawing metal Kufanele kukhethwe ikhumbula clove encane. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukuze andise ijubane akwanele ukuba imodi reciprocating, ngakho-ke kuyadingeka ukuba enze sawing phezulu. Uma uthenge profiled kuka ukusika izinto, kubalulekile ukunquma masinya esigabeni sokuqala. Kodwa uma usebenzisa jigsaw, khona-ke kungenzeka kunemisebenzi ngokuphazamisa kwesiphambano-cut, uma ukuphakama ishidi iphrofayli idlula 25 mm. Phakathi kwezinye izinto, isivinini ahlabayo kuzoncishiswa eqhathaniswa ipharamitha efanayo isici grinder. Sika ibe izicezu Jigsaw akuyona njalo elula, kodwa lapho esebenzelana nabantu i analog kagesi uyobe ewashisa emaphethelweni, kodwa namanje hhayi kakhulu ngendlela uma usebenzisa engela grinders. Njengoba umkhuba ubonisa, usebenza nge-jigsaw ihambisane nohlelo umsindo ezingemnandi.
Ukusebenzisa isikere, metal
Scissors ngoba cutting of ebhodini lukathayela Kuvamile futhi ngempela, ukusetshenziswa kwazo kuhambisana eziningi eziwusizo. Leli thuluzi umane esisemqoka sokuthi kukhiqizwe izicezu, kanye eliphezulu elola sikelo ngeke babhekane kahle abukhali. Kodwa sikelo musa sibhekane ngokuphumelelayo floorings ukuba usike lengthwise, kusukela kulesi siqondiso amashidi abe nezimo ngokuphelele ongaphakeme. Ububi eyinhloko ukusetshenziswa sikelo akuzona njengoba onqenqemeni iqonde, okuyinto ingatholakala emva ukusika. Namuhla, i-izinto zokwakha lalivamile is profiled, wena sinqume, bacabanga amakhosi eziningi ezifuywayo. Ochwepheshe bathi kuyithuluzi eliphumelela kakhulu lokhu kubhekwa sikelo kagesi, usebenzisa okuyinto kungenzeka ukuthola onqenqemeni ngokuphelele bushelelezi.
Ukusebenzisa handsaw isiyingi
amashidi lukathayela letihambisana kahle ukusika usebenzisa conveyers for ofuna ukufaka drive serrulate namazinyo pobeditovymi. Ukuze ngokushesha futhi kalula enze umsebenzi odingekayo futhi acele usizo umuntu wesibili, kodwa ukondla lapho ukusika kufanele kube omncane. Ukuze uvimbele umonakalo upende, kubalulekile ukwenza umqhubi emapheshana imihlobiso, ubude kabani okufanele azisizi 1.5 m, kuyilapho ububanzi ungakwazi ukukwenza kufanele kulingane 300 mm. Ngokusho isikhungo kanye strip udinga ukusika inkatho engakafiki kuphelile, liyoba ireferensi iphuzu umsebenzi. Lapho usebenzisa i kagesi isandla isaha, uyibhala inothi amaphuzu amabili cut imigqa kubo wazinameka umqhubi. Kulokhu, inkatho kufanele kuhambisane amaphuzu wawubona ke indwangu kumele kahle agxishiwe ungaqala ahlabayo. Saw inhlukano kagesi kufanelekile amashidi, kodwa kancane esingaphansi snips ithini.
Ngokuthenga ibhodi lukathayela, abathengi ucabanga ukuthi hlobo luni ithuluzi ukusika nokusebenzisa kwayo. Ngokwesibonelo, reciprocating wabona Bosch lungadizayinelwe ngalokho, njengoba lokhu kungaba aphambane onqenqemeni impahla. Uma ufuna ukusheshisa inqubo yomsebenzi, kungcono ukusebenzisa grinder kanye disc olukhethekile lesi siphakamiso ziye ethulwa ngenhla. Bosch reciprocating wabona senzelwe ukusika metal evamile kakhulu nezinkuni.
Njengoba isibonelo esinjalo PSA imodeli 700 E zingancishiswa, okuyinto kuyodingeka bakhokhe ruble 6200. amandla sensimbi 710 W, futhi inani eliphezulu okulingana 2700 linemibhikisho ngomzuzu. Ithuluzi ezifana guillotine, futhi, esetshenziswa usike nensimbi, kodwa yokugcina kufanele ibe bushelelezi, ngaphezu, imishini enjalo zingatholakala kuphela phakathi ochwepheshe, njengoba kuba impela omkhulu futhi kuyabiza kakhulu. Yingakho guillotine ukusika ibhodi lukathayela kungahlali ekhaya.
Uma unquma ukuthenga profiled nganoma yisiphi uhlobo lomsebenzi, kubalulekile ukuba banake ilebula, ngoba inquma nesikhundla impahla. Ngamunye isithakazelo umthengi ngisho Ubukhulu, isib, C8 ishidi has a ububanzi Imininingwane elilingana 1200 mm, kodwa ububanzi ezisebenzisekayo kuyinto 1150 mm. I amaphrofayli ukuphakama ezihlukahlukene okokusebenza 8 mm, kanye ukushuba zingahluka kusuka 0.4 kuya 0.8 mm. Decking, osayizi ishidi okukuvumela ukuba kuqedwe impahla Ukweqa futhi ipharamitha ezifana iphimbo phakathi izimbambo, esimweni kokubalwe alebuliwe, lokhu ipharamitha kuyinto 62,5 mm.
Ukudayiswa kungatholakala ngaphansi decking nezinye mshini, isibonelo, C10. Lokhu lukathayela ibhodi, ishidi osayizi akha 1155 mm, ngokuphathelene ububanzi, ingasetshenziswa ukusetha kocingo.
Lake Coin - Iyiphi indawo engcono kakhulu umdobi